1। जब स्टप छ लस व्यापार आफ्नो 10 मिनेट भित्र फेरि गल्ती भिजेको।
8803पीटी एल भङ्ग र आफ्नो मुख बाट बकवास बन्द बाट व्यवहार निकल गरेको 877 आए।
876 मा तपाईं फिर्ता फेरि आउनेछ 879 छोटो बिक्री Kerr, 10 मिनेट छ SL।
यदि यो हुन्छ तपाईं पुरा दिन को लागि मुछिनुभएको हुनेछ र हुनेछ एस र एक व्यापार बिना एल।
एक व्यापार 5000 को नै हानि दिनेछु।
यो सही हो?
6 29 बजे दोस्रो व्यापार गर्न SL6बजे। अब बिक्री-बन्द छ कि 60% मौका को एक लहर आउँछ अघि खरिद गरिएको थियो।
कुनै पनि वस्तु वा घृणा प्रेम पर्नु गर्न 2. दोष।
चाँदी पोस्ट2दिन प्रशस्त त्यसपछि पनि छैन तेस्रो दिन मा उनको हात लागू हुन्छ। तपाईं 400 -400 अंक दुई दिनमा भन्दा तेस्रो दिन कमाएका र भरोसा मा 1200 अंक पछाडि जानुहोस्।
कच्चा मा लस2दिन स्टप सारियो तपाईं स्क्रीन हटाइएको छ। सूचना तब थाहा हुनेछ उहाँले त्यहाँ एक-पक्षीय हुनेछ तेस्रो दिन मा 2-दिन दायरामा फंसयो थियो।
धेरै व्यापारीहरु म मात्र सुन सुरु -silvr भन्छन्।
म एउटै मिश्रण छ।
त्यसैले टाउको बुलियन जन्म थिएनन् भन्छन्। जब तपाईं सार्न कपर निकल साझेदारी मिनी धेरै सुरु कारोबार गरेका छन्। नेतृत्व -jink, कच्चा -nechurl ग्याँस --- सबैलाई व्यवहार, त्यसपछि दैनिक घोडा गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ Intraday मा तल्ला भाग्न।
3. यहाँ आज नै हिजो के भयो, छ। तिनीहरूले सबै विचार छैन।
यी सबै सोच र थाहा किनभने मूल्य अपरेटर (ठूलो माछा) छ।
हो, तीन महिनामा भएको छ तर के, चार्ट ढाँचा सानो मात्रा मा बारम्बार गरिनेछ।
स्टप हानि बिच्छेद कुनै गल्ती हो।
प्राविधिक आए खरीद र अचानक बजार, व्यापार, पनि SL भङ्ग भएको थियो जो तपाईं कुनै गलत कारण पल्टाइदिनुभयो थिए।
तपाईं त स्टप रो भने छैन र 11 घण्टा9बजे अर्को समय स्लट मा सही मौका लागि प्रतीक्षा वा कहिलेकाहीं तपाईं पनि ढाकिएको एक हानि कमाउन हुनेछ।
4 सम्पूर्ण दिन स्क्रीन, वा व्यापार समातिए गर्न खतरनाक छ।
मान्छे 2% प्लस दलाल सबै दिन पनि साँझ ती जो लाभ हुनेछैन बचत संचार।
यहाँ सान्त्वना छैन haram छ।
दिउँसो सबैभन्दा मानिसहरू घाटा shoveling एक दाग छ र यो रात मा अप भर्नु राख्न। कहिलेकाहीं उहाँले 5000 थाले देखिन्छ, देखिन्छ जो 2000. ब्रोकरेज + कर हेर्न चाहँदैनन् देखेको छ न कि 5000 कवर, भएको छ।
जब कसैले कारण किन झटका पाउन एक दलाल संग क्रेडिट / डेबिट खाता सोध्छन्। कि दलाल चोर भाइ आपत्ति गर्न आउँछ।
हामी बीचमा बाहिर हुन थियो क्रोधित तपाईं एक पिता बन्ने समाचार मात्र आएको छ जो केही आउनेछ छन्। यस यात्री, छैन सञ्चालकको जिम्मेवारी को टिकट। चलानी सवारी कब्जा गरिएको छ।
हो, मरेका मर दैनिक मा नयाँ जीवन सास फेर्न गर्न फोनको लाभ।
5 टिप वा परीक्षण मुक्त छैन।
कसैले भन्न थिचिएको एउटा सन्देश बटन पठाउँछ र मान्छे फरक नाम को निःशुल्क परीक्षण लिन चलाख बन्न। पैसा फोन, यो स्पष्ट चुपचाप हिंड्न हुनेछ भयो र त्यसपछि रोक घाटा भयो लागि कतै मिल्यो छ। भाइ तथ्याङ्कले उहाँले व्यापार थियो, फोन हानि रोक्छ राखे। कुनै फोन पैसा बाहिर छैन।
2 -4 वर्ष लाखौं सारियो, बुद्धि को 20,000 लागि बाहिर आंकडा भएन कति पटक2लाख मानिस।
तपाईं पैसा दिए भने टिपर, यो निद्रामा गर्न देखि आ पैसा छैन, हुन, आफ्नो काम बुझ्न प्रयास यो पनि बनाउन समर्थन प्राप्त हुनेछ SL।
Oftentimes नकारात्मक फोन, टिपर व्यक्ति व्यापारीहरु गर्न क्षति, बुरा बन्न उहाँलाई Uljayega काम जोड।
6 लक्षित गरेको पुच्छर पकड र घाटा सम्म कुनै निद्रामा हुन रोक्न नगर्नुहोस्।
एक वर्ष, पसलमा हरेक दिन खुल्छ7दीवाली -akha तीज आउँछ।
8 म केही, म सिर्फ हुनेछ यो व्यवसाय बस समय पारित गर्न।
9 म के लाभ दिन को धेरै महिना छ गर्नेछ?
10 त्यहाँ हप्ता वा महिना भर बर्बाद गर्नुपर्छ - यो पनि राउन्ड आउँछ र व्यापारीहरु उहाँलाई जानुहोस्।
त्यसैले 11 सबै धेरै? गणना व्यापार योजना रहने र यो संग टाँसिएको धेरै क्षति कसरि भङ्ग रोक्नुहोस्। तपाईं जीत र राम्रो Commaoge जीवन पाउन।
मलाई 12 कुनै शुद्ध जडान छैन। म फोनमा व्यापार। कोच धेरै अलग छैन।
म तीन वर्षसम्म मैले प्रशिक्षण आवश्यक छैन व्यापार गरिएको छ। बस कल।
प्रतिक्रियाको लागि उहाँलाई कल
प्रशिक्षण र सुर्रे सुझावहरूको लागि कल